Rehetra ny tsara tarehy toerana manodidina dia hita amin'ny alàlan'ny fijerin'ny fiaran-dalamby Express be maso isaky ny fiara mpandeha. ny dia tonga amin'ny fara tampony ao amin'ny Bernina Pass. amin'ny 7,000 feet ambonin'ny ranomasina, ny handalo mora tezitra dia snowstorms. Mandritra izany fotoana izany, talaky masoandro Italia miandry anao amin'ny hafa ity farany dia. Toerana mahafinaritra ity mitaingina fiaran-dalamby dia tokony ho voatery amin'ny lisitry ny siny tsirairay amin'ny siny.
Mandritra izany fotoana izany, manatevin-daharana ny Express tamin'izany lisitra misy ny dB na Deutsche Bahn. Alemaina ny fiaran-dalamby-pirenena Network manome ny sasany amin'ireo Toerana mahafinaritra indrindra mitaingina akaikin'ny Reniranon'i Rhin. Ny lalana dia handray anareo amin'ny alalan'ny fomba fijery namely ny Alpes lohasaha sy ny tendrombohitra. Ohatra, ny fomba tsara indrindra mankasitraka Eoropa ny renirano lava indrindra dia amin'ny alalan'ny lalana izay mampifandray ny tanànan'i Mainz sy Cologne. Io lalana mitondra anao amin'ny alalan'ny fanahy havoana, korontam lapa, ary terraced tanim-boaloboka.
Tsy misy resaka ny mahavariana lamasinina nandehanany, raha tsy anisan'izany ny Trans-Siberia Express. Fantatra koa amin'ny hoe ny lava indrindra nandeha fiaran-dalamby eto an-tany, ny Trans-Siberia Express Mampifandray Moscow tany amin'ny faritra andrefan'i Rosia ho any amoron-tsiraka tanàna Rosiana Vladivostok in Atsinanana. Teny an-dalana, ny lalamby dia mivoaka mankamin'ny akaiky firenena toa an'i Sina, Mongolia, ary Korea Avaratra. Maro toerana in Eoropa Andrefana, anisan'izany Amsterdam, manana gara izay tolotra mitaingina ny Trans-Siberia fiantsonana ao St. Petersburg, Rosia. Tsy mahagaga àry raha maro no Eoropeana misafidy ny handray ny lamasinina, rehefa sahisahy east.
Ity dia lafiny iray hafa mahavariana sy tsy jerena lalamby Tsidika. Azo antoka, misy na inona na inona toy ny olona sy ny traikefa ianao tojo teny an-dalana. Miomàna hihaona sasany mahavariana indrindra ny olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao. Na inona na inona cross-tany dia ianao lamasinina tamin'ny, ianao mety miafara nahita namana iray na roa amin'ny mpiray levitra lavitra. Na ianao maka ny Toerana mahafinaritra Bernina Express, mivezivezy amin'ny firenena maro ao amin'ny Deutsche na ny Bahn na ny Trans-Siberia Express, na sasatra teny Glacier Soisa ny Express, izay The Culture Trip dia mamaritra toy ny dia izay mpifanandrina ny hitan'ny ny Bernina, nandehananay an-fiaran-dalamby dia maintsy ho iray amin'ireo zavatra mahavariana indrindra eo amin'ny fiainanao.
Mba hahazoana traikefa fiaran-dalamby tsara indrindra amin'ny fiainanao, amin'ny vidiny mora indrindra, ary nesorina ny saram isalasalana famandrihana, fampiasana Save A Train!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-train-travel-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)